भा’इरल तस्वीरले महिला कर्मचारी मा’नसिक त’नावमा ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भा’इरल तस्वीरले महिला कर्मचारी मा’नसिक त’नावमा !
भा’इरल तस्वीरले महिला कर्मचारी मा’नसिक त’नावमा !
५ साउन, काठमाडौं । सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा पुरुष र महिलाले यात्रा गरिरहेको एउटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा निकै भा’इरल भइरहेको छ । मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी महिलाले लगाएको पोशाकलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएका छन् ।यो तस्वीरका विषयमा अहिले धेरैलाई कौतुहल पनि छ । तस्वीर वास्तविक नभएर फोटोसप गरिएको पो हो कि ?
मोटरसाइकलमा सवार व्यक्ति नजिकका नातेदार पो हुन् कि ? उनीहरु कुनै विशेषखालको परिस्थितिमा हिँडेका थिए कि ? सामाजिक सञ्जालमा यस्तै परिचर्चा भइरहेका छन् । यस विषयमा अनलाइनखबरले खोजिनीति गर्दा प्रदेश–३–०२–००१ ब–१४१२ नम्बरको उक्त मोटरसाइकल धादिङस्थित गल्छी गाउँपालिकाको भएको पत्ता लाग्यो ।
मोटरसाइकलमा सवार पुरुष र महिला सोही गाउँपालिकामा कार्यरत इञ्जिनियर र सव-इन्जिनियर हुन् । केही महिनाअघि मात्रै जागिर सुरु गरेका उनीहरु प्रशासनिक कामले काठमाडौं आएका बखत मोटरसाइकलमा सँगै हिँडेका थिए । उनीहरु सिट रोल (सरकारी कर्मचारीलाई दिइने संकेत नम्बर) को कामले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विदा मागेर गत बिहीबार काठमाडौं आएको खुलेको छ ।
बबरमहलस्थित निजामति किताबखानातर्फ जाने क्रममा कसैले पछाडिबाट तस्वीर खिचेको थियो । तस्वीर कसले खिचेको हो भन्ने खुलेको छैन । तर, यसलाई भाइरल गराउने काम चाहिँ पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले गरेका थिए । एक लाखभन्दा बढी फलोअर्स भएका उपाध्यायले ‘सरकारी मोटरसाइकलको दृश्य’ भन्दै तस्वीर पोष्ट गरेको केहीबेरमै फेसबुकभरि फैलिएको थियो ।
कुराकानीमा पूर्वसचिव उपाध्यायले आफूलाई एकजना साथीबाट इनबक्समा सो तस्वीर प्राप्त भएको बताए । ‘मलाई चिनेको साथीले फोटो पठाउनुभयो । सरकारी मोटरसाइकलमा त्यस्तो लुगा लगाएर हिँडेको देख्दा अलि अनौठो लागेर पोष्ट गरेको थिएँ । एकैछिनमा भाइ’रल भयो,’ उनले भने । केहीबेरमा उपाध्यायलाई सम्वन्धित व्यक्तिले फोन गरेर तस्वीर ह’टाउन आग्रह गरेपछि उनले हटाए ।
तस्वीर भा’इरल भएपछि महिला कर्मचारी आहत बनेकी छन् । उनले तस्वीर कसले र कहाँ खिचेको हो भन्ने थाहा नभएको बताइन् । ‘म कार्यालयबाट विदा लिएर काठमाडौंमा थिएँ । मेरा सहकर्मी पनि काठमाडौं आउनुभएको थियो । हामी सिटरोल लिनका लागि निजामति किताबखानामा सँगै गएका थियौं,’ उनले भनिन् ।
घरबाट घुम्न जाने हिसाबले निस्केको भएर पोशाकमा ध्यान नपुगेको उनले बताइन् । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर देख्दा अचम्मित र दु:खित बनेको उनको भनाइ छ । ‘तस्वीरमाथि यति धेरै वि’वाद गरिनु आवश्यक थिएन होला । यसले मलाई निकै मा’नसिक त’नाव भएको छ । मेरो परिवारलाई पनि अप्ठेरो भएको छ । सोच्दै नसोचेको कुरा भयो,’ उनले भनिन् । आइतबार काममा फर्कने गरी काठमाडौं आएकी उनी यही त’नावले गर्दा अहिले पनि काठमाडौंमै छिन् ।
गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले उनीहरु दुवै बैरनीबाट काठमाडौं सँगै आएको बताए । ‘मैले बुझ्दा उनीहरु बैरेनीबाट एकसाथ काठमाडौं आएका हुन् । लकडाउनमा पनि दिनरात खटिएर उनीहरुले ३० गते आफ्नो काम सबै सिध्याएका थिए । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विदा मागेर आइतबार फर्किने गरी वि’दामा आएका हुन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
महिला कर्मचारीको पोशाक चाहिँ आफूलाई पनि चित्त नबुझेको उनले बताए । ‘मलाई साथीहरुले फोटो देखाए । पोशाकचाहिँ अलि नमिलेकै हो । पछाडि ढाड तलसम्म देखिएको छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, सरकारी कर्मचारीले सरकारी सवारी साधनमा यात्रा गर्दा यस्तो पोशाक लगाउन हुँदैनथ्यो ।’ यस विषयमा आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सोधपुछ गरेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मैले दुवै इन्जिनियरसँग लिखित स्पष्टीकरण पनि माग्ने विचार गरेको छु ।’
महिला कर्मचारीले लगाएको पोशाकका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु आएको सन्दर्भमा हामीले वरिष्ठ सञ्चारकर्मी निर्मला शर्मालाई सोध्यौं, ‘सरकारी मोटरसाइकलमा चढेकी महिलाको पोशाकबारे सामाजिक सञ्जालमा आ’लोचना भइरहेको छ, यसलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?’
जवाफमा शर्माले भनिन्, ‘कर्मचारी वा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरुको पोशाक म’र्यादित हुनुपर्छ । पब्लिक व्यक्ति भइसकेपछि ड्रेसअपमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ तर, ती महिलाले गरेको एउटा कमजोरीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि धेरै आ’क्रमण गर्दा त’नाव बढ्न सक्ने कुरामा शर्माको स्वीकारोक्ति छ ।
यस्तो विषयमा सम्वेदनशीलता अपनाउन शर्माले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनीमाथि धेरै नै ए’ट्याक भएको छ, कम्तिमा फोटो खिच्नु अगाडि एकचोटि उनीसँग सहमतिचाहिँ लिनुपर्थ्यो । तर, पनि पब्लिक व्यक्तिले ड्रेसअपमा चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
ओलीसँग कुरा नमिलेपछि बहुमतको फायर खोल्ने प्रचण्डको तयारी नेपाल खनालको साथ
बालाजुमा ट्याक्सी र मोटरसाइकल ठोक्किँदा नुवाकोटका दुई युवकको ज्यान गयो